musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Nyowani Drone inogona kusimudza 200 kg uye nhunzi makumi mana emakiromita
Une mamwe mashoko ekuwedzera pane iri kuburitswa?
Iwe une chero ruzivo rwekuwedzera, mapikicha, mavhidhiyo kana zvinobatsira zvinongedzo?
Dzvanya apa kuti utore iyi yekuburitsa uye zvakare uwane zvakanyanya kuoneka.
Kuti uwane rumwe ruzivo rwekuti ungatumira sei kuburitswa mune ramangwana nesu, enda ku www.travelnewsgroup.com/visibility
Volocopter yemagetsi inorema-inosimudza drone VoloDrone yaita ndege yayo yekutanga kuruzhinji nhasi paIT Yayo World Congress 2021. Pamwe chete nemutungamiriri wenyika dzepasi rose DB Schenker, Volocopter, piyona wekufambiswa kwemweya wedhorobha (UAM), aratidzira kusangana kweVoloDrone musoni mune yekupa zvinhu necheni yekupedzisira. kutakura kuratidzira. Vafambidzani vacho vakaratidza kufambira mberi kwavo kwakabatana pamwechete kubvira DB Schenker yakava investor wezano weVolocopter kutanga kwa2020.
IVoloDrones yakagadzirirwa kutakura mubhadharo unosvika mazana maviri emakirogiramu. Izvi zvinoita kuti vakwanise iwo akasiyana siyana anorema-basa mashandiro uye chaizvo kutaura chokwadi zvakare akanaka kutonhorera.
Iwo maVoloDrones ari kuenda kure. Nehurefu hwemakiromita anosvika makumi mana, ivo vanokwanisa kushanda mukati meiyo nharaunda hombe kubva panzvimbo yavo yekutora. Yakasanganiswa nemutero wakakura uyu unovhura mikana mikuru.
Kunge yedu VoloCity yematekisi emhepo, iyo VoloDrone inoshanda 100% magetsi emagetsi uye nhunzi dzakasununguka. Yakachena uye yakanyarara - ndiyo nzira kwayo yekutakura.